UGAAR AH RAGGA: 3 Qaab Oo Sare Loogu Qaado Shaqada Xagga Sariirta | Aayaha
Aayaha editorJune 17, 2020
Shabakadda Arrimaha Bulshada ee Aayaha Online, waxay idiin soo gudbineysaa 3 qaabood oo aad ku hormarin kartid bandhiggaa kulanka sariirta.
Noqo mid fir fircoon
Galmada waxay sare u qaadaa garaaca wadnahaaga balse jir dhiska joogtada ah ayaa kaa caawinaya bandhigga ciyaarta sariirta inay noqoto mid heer sare ah, 30 daqiiqo maalintoo oo jird his ah oo isugu jira orod iyo jirdhiska nuucyadiisa kale ayaa sameyn kara layaab iyo inaad awood ku yeelatid kulanka sariirta
Qaar kamid ah cunnooyinka ayaa kaa caawin kara sare u qaadidda socodka dhiigga. Waxaa kamid ah Basasha iyo Sanjabiisha, cunnooyinkaan waxay noqon karaan kuwo aanan u fiicneynta afkaaga ama shiirka afka, balse waxay kaa caawinayaan wareegga dhiigga, sidoo kale waxaa qudaartaas kamid ah Muuska oo ay ku jirto maadada potassium-ka oo kaa caawinaysa hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga taasoo muuhiim ah qeybaha galmada isla markaana xoojineysa bandhigga sariirta.
Iska yareey walaaca
Walaaca wuxuu saameeyaa caafimaadka kacsiga iyo dareenka qofka. Walaaca wuxuu sare u qaadaa garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga kuwaas oo dhammaantood dhaawacaya rabitaanka galmada iyo waxqabadkeeda.
Walaaca nafta wuxuu saameynayaa kacsiga, si, kastaba, jirdhiska waa hab wanaagsan oo aad iskaga yareyneysid walaaca isla markaana aad ku hormarineysid caafimaadkaaga.
4 Sabab Oo Kulanka Raaxada Xiliyada Roobku Uyahay Kan Ugu Cajiibsan